Guddoomiye Ismaaciil: Waa lagu ciyaaray Hab-maamuuskii dowladnimo ee Puntland – Puntland Post
Posted on February 23, 2020 February 23, 2020 by CCC
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Puntland
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Wakiilada Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa madaxweyne Deni ku eedeeyay, in uu ku ciyaaray Hab-maamuuskii dowladnimo, kadib markii uu kusime ka dhigtay wasiirkiisa Caddaaladda.
Abuukaate Ismaaciil oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday Garoowe, ayaa sheegay in haddii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisu dalka ka maqan yihiin, ay tahay in talada lagu celiyo Guddoonka Baarlamaanka, maadaama Puntland ku dhisan tahay Parliamentary system.
Parliamentary system: waa nidaamka madaxweynaha ay soo doortan Golaha Baarlamaanka, sidaas darteedna dowladda nidaamkaas ku dhisan, hay’adda ugu sarraysaa waa Baarlamaanka.
“Puntland waa baarlamanteri haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay maqan yihiin waa in talada Baarlamaanka lagu soo celiyaa, sida aan hadda wax ku wadno waa ‘Maamuus ku ciyaarid” ayuu yidhi xildhibaan Ismaaciil.
Puntland oo hadda ay dalka dibaddiisa ku wada-maqan yihiin madaxweyne Deni, ku xigeeniisa Axmed Karaash iyo Guddoomiyihii Baarlamaanka Abwaan Cabdirashiid Jibriil, waxaa ku sime madaxweyne ka ah Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda, Arrimaha Diinta,Dastuurka iyo Dhaqan Celinta Cawil Sheekh Xaamud.
Hadalka Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamanka ayaa ku soo beegmay, iyadoo warbaahinta Puntland Post ay todobaadkii hore qortay warbixin iftiimisay cidda nidaam ahaan sii hayaha madaxweynaha noqon karta, maadaama Puntland ay Parliamentary system ku dhisantahay.